केराको फूल पनि हुन्छ लाभदायक, यस्ता यस्ता रोगबाट मिल्छ छुटकारा ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/केराको फूल पनि हुन्छ लाभदायक, यस्ता यस्ता रोगबाट मिल्छ छुटकारा !
काठमाडौं । केराको बोटको सबै भाग काममा आउँछ । चाहे फूल होस वा डाँठ । सबै खान मिल्छ । यहाँसम्म कि केराको पातको प्रयोग खाना खानको लागि प्रयोग हुन्छ । केराको डाँठ पत्रिका बनाउन प्रयोग हुन्छ । केराको फूल खाँदा तपाईको धेरै रोग हटाउन सकिन्छ ।